Magacaabistaydii iyo Maagistaydii: Laba isku Lammaanaa Qormadii 16aad Boobe Yuusuf Ducaale – Araweelo News Network (Archive)
Waxa laga yaabaa in aydaan sidiisa u garan xigashadii aanu shalay ka soo qaadannay Damal Cabdilqaadir Koosaar Cabdi, ee bal hadda aan faah-faahin kooban ku samaynno. Hadda intaasi af-lagaaddaba ha igu ahaato e?. Nin Mujaahid ah oo tilifoon ii soo diray ayaa I xusuusiyay in aan
dib ugu yara noqdo.
Si fiican oo xogogaalnimo ah ayaan ula socday waxyaabaha wasaaradda ka socday iyo waxyaabaha waxyeellada ku ahaa hawlaha Qarankaba. Tan iyo maalintaa Heshiiska lala galay Shirkadda ?Satelite-ka? ee ?Hotbird? xafiiska Wasiirka Madaxtooyada iyo Bashe Cawilba waxa kale oo ay ku hawlanaayeen sidii loo beddeli lahaa Heshiiska ?Thaicom? oo London ayaa laga raadinayay meel looga guuro. Dhinaca London waxa hawshan kaga jiray Agaasimaha TV-ga Qaranka oo xidhiidh joogta ah la lahaa Madaxtooyada iyo Wasaaradda Warfaafintaba. Hadda in Xukuumadda kharashyada laga yareeyaa wax ceeb ah ma laha, aniguna waxba kama qabin, bal se qaabka wax loo beddelayaa mid muuqda ama xalliiban (transparent) waa in uu noqdaa oo la wada arkayo.
Maalmo ka dib ayaa yaabkii iigu weynaa igu dhacayaa. Waxay ahayd in Heshiiskaas qabyada ahaa la ii soo celiyo iyada oo uu dhinacii kalena soo saxeexay. Waxba la ii ma soo celin. Dhowr maalmood ka dib ayaan si balaf ah ku maqlay Heshiiskii wuu hirgalay oo Baanka Dhexe ayaa lacagtii diraya. Anigu mar walba waxaan la taagnaa Heshiiska ?Thaicom? waxa laga baxayaa ama la jebinayaa oo keliya, marka ?Satelite? kale oo beddeli kara la helo. Maalin danbe ayaan Baankii Dhexe tegay. La-ye lacagtii Heshiiska ayaa la dirayaa oo hadhow Wasaaradda Warfaafintu bixin doontaa. Anna yaabay oo idhi: ?Yaa amarkaa bixiyay.? Qoraal iyo af midna la ii sheegi waa, aniguna madaxdii Baanka waxaan u sheegay oo aan kaga tegay in aanay Wasaaradda Warfaafinta ee aan mas?uulka ka ahay Heshiiskan aqoonsanayn ilaa uu sharci noqdo oo uu dhinaca kalena soo saxeexo. Waxyaabahan sida caadiga ah aad ugu sheekaysataan ayuun baan idiin qorayaaye wax kale ha u qaadanina. Ma is-tidhaahdeen odeygu wuxu yar muujiyay dhego-adayg iyo debecsanaan la?aan aan loo baahnayn. Bal adba!
Been ku hadli maayo e?, aniga oo Juba iyo Koonfurta Soodaan jooga ayaan ka fekerayay in TV-ga laga hoos-saari doono Wasaaradda, ka dibna xaalku gawaan cidla? ah noqon doono. Bal hadda sheekadan u fiirsada. Agaasimaha TV-ga Qaranka ee maanta xilkaa hayaa beri hore ayuu ka yimid dalka Ingiriiska. Waa waqtigii Hargeysa laga furayay Hargeisa International Book fair-ka (HIBF). Guriga shaqaalaha ayaan ku arkay ama kula kulmay maalmihii loo diyaargaroobayay oo ahayd bishii Juulay. Isaga oo laba bilood joogay Hargeysa gudaheeda ayaanan maalin keliya arkin ama aanu xafiiska iigu iman aniga oo Wasiir u ahaa, xaqiiqaduna waxay tahay in aan ugu magacawnaa bal se cid kale mas?uul ka ahayd una ahayd. Hadalka waxba intaa u dhaafi maayo.
Wuxu ninkaasi ka dhexeeyay Xafiiska Agaasimihii hore ee TV-ga Qaranka iyo Madaxtooyada gaar ahaan ninka Baashe la yidhaado. Shaki igagama jirin in uu jiray qorshe la fulinayay. Dhacdooyin taxan ayaa ii muuqday: beddelaaddii Agaasimaha Guud, Hanti-dhowrkii, Xadhiggii Agaasimihii Maamulka iyo Xisaabaadka ee TV-ga iyo saansaan badan oo kale. Agaasimaha Maamulka iyo Xisaabaadka ee TV-ga Qaranka waa ay ku adkaatay in ay cid kale ku beddelaan, waayo cid kasta oo iman lahaydba waxay ahayd mas?uuliyad aan wasiir ahaan u lahaa oo aan la ii dhaafi karayn. Maxaa loo danaynayay TV-ga? TV-ga wax kale oo loo danaynayay ma jirto mana jiri karin oo aan ahayn dhaqaale. Halkii uu TV-ga Qaranku ka gargaari lahaa hay?ado warfaafineed, ayaa laga door-biday in ay qofaf ku danaystaan sida aan is-idhi. Hadda waa malahayga, in ay dhacdana la arkee. Xidhiidhadii e-maillada waxyaabo badan oo aan ka soo xigan karo ayaa jira oo aanan u hollanayn bal se ka sarriiganayo.